बाल अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ – Sourya Online
बाल अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
काठमाडौँ, २ चैत । सामान्यतया स्त्रीरोग अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ नै निर्देशक हुन्छन् । न्युरो अस्पतालमा न्युरो विशेषज्ञ । अनि आँखारोग अस्पतालमा आँखारोगका विशेषज्ञ । तर, महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा भने यस्तो चलनलाई आत्मसात् गरिएको छैन । बालबालिकाको मात्र उपचार हुने सुविधासम्पन्न एक मात्र सरकारी अस्पतालका निर्देशकका रूपमा बालरोग विशेषज्ञले नभई स्त्रीरोग विशेषज्ञले काम गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघको पहिलो साता अस्पतालका निर्देशक डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीलाई हटाएर भेरी अञ्चल अस्पतालमा निर्देशकका रूपमा कार्यरत डा. विमल ढकाललाई कान्ति बाल अस्पतालमा निर्देशक बनाएर ल्याएका हुन् । सन् १९८४ मा एमबिबिएस सकेका डा. ढकालको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ८३५ रहेको छ ।
डा. ढकाल बालरोग विशेषज्ञ नभएकाले कान्तिमा ल्याउन नहुने कर्मचारीको भनाइप्रति बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले उनलाई कान्तिको निर्देशकका रूपमा नियुक्ति दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘बालरोग विशेषज्ञलाई नै निर्देशक बनाउँदा अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन्छ भनेर मन्त्रीसमक्ष कुरा राखिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर मन्त्रीले डा. ढकाललाई नै ल्याउनुभयो ।’
अस्पताल स्रोतका अनुसार अस्पतालकै वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. चण्डेश्वर महासेठ, डा. रोजनसुन्दर श्रेष्ठ र डा. आरपी विच्छालाई निर्देशक बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘तर बालरोग विशेषज्ञ हुँदाहुँदै स्त्रीरोग विशेषज्ञ त्यो पनि जनरल प्राक्टिसबाट ११औँ तहमा बढुवा भएकालाई निर्देशक बनाउनु अस्पतालको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो,’ स्रोतले भन्यो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले सैद्धान्तिक रूपमा अस्पतालको कार्यक्षेत्रअनुसारकै विषयगत विशेषज्ञ निर्देशक हुनु राम्रो भए पनि बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले कार्यक्षेत्र नमिल्ने डाक्टरलाई निर्देशक बनाइएको बताए । उनका अनुसार यसअघिका निर्देशक डा. बुर्लाकोटी पनि बालरोग विशेषज्ञ थिएनन् । उनी रेडियोलोजिस्ट हुन् । हाल डा. बुर्लाकोटी मन्त्रालयमा काजमा खटिएका छन् ।
कान्ति अस्पताल विकास समितिका एक सदस्यले भने बाल अस्पताल भएपछि सोही सेवाको विशेषज्ञलाई निर्देशक बनाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले मिलेसम्म बालरोग विशेषज्ञ र विशेषज्ञ डाक्टर नभएमा सिनियर डाक्टरलाई निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्दै कुरा उठाइरहेकै बेला मन्त्रीले खुसुक्क स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई निर्देशक